Yini odinga ukukwazi ukukhetha ilungelo, isethi tekusebentisa zibukeke ezikhangayo ifenisha ikamelo? Lo mbuzo uphakama esikhathini esithile ngamunye wethu.
Ucabanga ukuthi igumbi endlini yakho? Okokuqala, kuzomele kube ukhululekile ethwele Igumbi ukuphumula lapho kuyoba elula ukuhlangabezana abangane noma nje sokuphumula ngokuphelele ngemva kosuku olumatasa futhi kuyakhathaza.
Ifenisha ikamelo kungenziwa ukhethe onhlobonhlobo. Uma ujabulele isitayela Oriental, kuyoba odongeni, usofa, ithebula ikhofi, izihlalo kanye amatshe. Ukuze isitayela European ejwayelekile ngaphezulu amafasitela, amatafula, amakhabethe kanye sideboards, bele wokukha Yiqiniso, SOFAS. Ngokuhambisana mehluko, kanye izintandokazi zabo, futhi kufanele ukwakha emaqaqasini ekamelweni lakho.
Ekuqaleni, ukuzama Igumbi Zoned ngokwengqondo unqume ukuthi endaweni ngayinye titawudvwetjwa. Ngakho-ke kuyoba lula ukunquma indlela engcono ukuhlela ifenisha ukuze kwakhiwe ihholo: kungcono ukubeka phakathi nendawo, nokuthi zingahlelwa emagumbini.
Ngakho sathuthela ukuthi ikamelo ngo 90% amacala senziwa iKhabhinethi ifenisha. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, siyobe senza odongeni owaziwa. Kodwa namuhla, abakhiqizi ifenisha ukunikela onobuhle eziningi kangaka zefanisha ukwenza ukukhetha okufanele ngesinye isikhathi kunzima kakhulu. Kaningi, abathengi uncamela izindonga ezinkulu futhi bulky, "ukuba ifa elikhulu." Cishe, emashalofini amakhabethe kulo ngeke nalutho, ngokuhamba kwesikhathi, zisuthe ngokuhle izinto ezingadingekile, okuyinto Kuyinto edabukisayo baphonse. ukuthi ukuthenga enjalo iyafaneleka? Nakani izindonga naphakathi: bephatha isikhala ingasaphathwa futhi ubukeka okuningi yesimanje.
Kwaphela isikhathi eside ifenisha ukuze kwakhiwe ihholo efulethini sikhethwe imibala yemvelo kuphela elinokuthula. Kodwa namuhla ungakwazi ukukhokhela ukukhetha okuthile okwengeziwe yasekuqaleni futhi engavamile. Ungakhetha amamodeli ukuhlanganisa imibala emibili noma emithathu.
Ifenisha ukuze kwakhiwe ihholo akugcini kokuba odongeni kuphela. Kuyadingeka ukuba ukhethe usofa. Ngaphezu kwakho konke, kulesi simo silingane ifenisha emincane ukuze kwakhiwe ihholo: kuhle kakhulu kufanelekile yokuphila ezindaweni eziphakathi nezwe, futhi ngaphandle kwalokho, uma ukwehla izivakashi, kuyoba imibhede egcwele futhi zikhululekile.
Ngaphambi kokuthenga a ifenisha ekhoneni upholstered kufanele ulinganise ngokucophelela egumbini. Iqiniso lokuthi la SOFAS kuthiwa inxele, sokudla futhi equilateral. Kukhona eyodwa isiqeshana, Monolithic futhi isitebhisi imodeli. Ngesikhathi iqoqo engela enamathiselwe kalula ukubuyela emuva kusukela phansi kusofa. Nquma ukuthi yini uhlobo ukuguqulwa evumelana nawe kakhulu. Kukhona amaqembu amathathu ekhoneni SOFAS:
Kubalulekile ukukhetha imodeli kwesokudla oyithandayo Upholstery. Okuvame kakhulu ezibhekwa umhlambi, chenille, jacquard, Sweden, Sweden, yemvelo isikhumba, isikhumba yokufakelwa, wangaphandle. Indwangu iphathwa Teflon-camera ekhethekile, okuyinto ngempumelelo ivikela ebusweni thuli ukungcola futhi ingangenwa amanzi.
Indlela ukukhetha isihlalo egumbini lokuphumula? Usayizi, uhlobo isihlalo design
Zokugqoka ephasishi kanye lokulala: yangaphakathi ukugcwaliswa inhlangano
Painting acrylic: izici ubuchwepheshe
Kungenzeka yini ukuba iqhwa chanterelles ebusika?
Lapho behlwanyela anyanisi ebusika? Yebo, ngo-Okthoba!
Okufanele ukwenze, lapho ziqala teething
Amazinga e-Egypt ngo-November. Kufanele yini ngiye?
Kanjani ukuze ome izinhlanzi. Ukupheka Tips
Okumangazayo Fir-Korean: zokutshala nokunakekela
I-jackhammer kagesi: incazelo nokuzikhethela